Fahfaahin ka soo baxeyso kulan xaley dhaxmaray Xildhibaanada ka soo horjeeda Mooshinka Guddoomiye Jawaari – idalenews.com
Waxaa xarunta Villa Hargeysa ka socda kulan ay leeyihiin Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaari ee la magac baxay Guddiga Badbaadada Baarlamaanka, waxaana xildhibaanada shiran lagu qiyaasay in ku dhow boqol Xildhibaan
Shirkan oo ah dhoolatuskii u dambeeyay ee Xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka ayaa la filayaa inay ka soo saaraan go’aan culus oo ah inuu buray Mooshinkii laga keenay Guddoomiye Jawaari, maadaama 10-kii maalmood ee qorshuhu ahaa in lagu horkeeno ay ku ekeyd maanta oo taariikhdu tahay 28-ka bisha March.
Wariyeyaasha ayaa looga yeeray xarunta Villa Hargeysa oo wax yar kaddib ay shir jaraa’id ku qaban doonaan Xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka.
Haddii Xildhibaanada go’aan ku gaaraan in mooshinka buray, waxaa xaalada ay noqon doontaa mid ka sii darta oo dhanka kale ee Xildhibaanada mooshinka wada aanay u cuntami doono.
Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in Mooshinka la horkeeni doono Golaha 31-ka bishan oo ku beegan Sabtida soo socota, waxaana go’aankaas ka soo horjeestay Guddoomiye kuxigeenka 2aad Mahad Cawad oo ku tilmaamay in aanu Guddoomiye Muudey xaq u laheyn in keligiis gaaro go’aanka iclaaminta kulanka, iyadoo aanay wehlin Guddiyada joogtada.
Dhinaca kale Xildhibaanada mooshinka ka wada Guddoomiye Jawaari ayaa iyana caawa kulamo gaar gaar ah ku leh magaalada Muqdisho, waxaa ay u muuqdaan kuwa ka war sugaya warka ka soo yeeri doona Xildhibaanada ku shirsan Villa Hargeysa.
Gaari ku qarxay agagaarka isgoyska Deg seg Zobbe ee magaalada Muqdisho